Blackguards, Mac App Store တွင်အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရောင်းချခဲ့သည် ငါက Mac ပါ
Blackguards များ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် အလွန်ကောင်းသောအခန်းကဏ္ play မှ ဒီအမျိုးအစားကိုကြိုက်နှစ်သက်လျှင်€ 35,99 နှင့်များသောအားဖြင့်အကန့်အသတ်သာရှိသောအမျိုးအစားတွင်သင် Mac ရှိသင့်သည်။ 9,99 € သငျသညျတှငျတှေ့ဂိမ်း၏ဤအပိုင်းအစပျော်မွေ့နိုင်ပါတယ် español။ ခြိမ်းခြောက်နေသောကမ္ဘာအတွက်တစ်ခုတည်းသောမျှော်လင့်ချက်သည်လင်းလက်တောက်ပသောသံချပ်အင်္ကျီများတွင်သာမကဝတ်စုံဆင်ယင်မှုနှင့်ရာဇ ၀ တ်သားများ၏လက်ထဲတွင်ရှိနေစဉ်ဘာဖြစ်မည်နည်း။ Blackguards တစ် ဦး လှည့် -based မဟာဗျူဟာ RPG ဘယ်မှာသင်ထက်ပိုပြီးရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မယ် စစ်မြေပြင် ၁၈၀ သောမှောင်မိုက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူပုံပြင်အတွင်းထူးခြားသော hexagons သူတို့ကရာဇဝတ်မှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့လူသတ်မှုတွေကိုပေါင်းစပ်တယ်။ ဆက်ဖတ်ပြီးနောက်မှာ၊ ဂိမ်း.
ကစားပါ စစ်သည်တော်, မျှောဆရာသို့မဟုတ်မုဆိုး မင်းလိုချင်သည့်အတိုင်းသင့်ဇာတ်ကောင်၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပါ။ ဤသည်စိန်ခေါ်မှုမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကျွန်တော်တို့ကိုတစ် ဦး ပေးသည် သံသယ, သစ္စာဖောက်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုများ၏သမိုင်း။ ရလဒ်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုတွင်သမိုင်းကြောင်းကိုသင်ဆုံးဖြတ်သည်။
1 main features တွေ:
2 သင်၏ Mac လိုအပ်ချက်များ -
3 ဗားရှင်း ၃.၂.၇ ထဲတွင်ဘာအသစ်များ
main features တွေ:
အဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေသောစိန်ခေါ်မှုအသစ်များကိုရင်ဆိုင်နိုင်ရန်ထူးခြားသောစစ်မြေပုံ ၁၈၀ ကျော်။
ဒီအမှောင်စိတ်ကူးယဉ်စွန့်စားမှုကသင့်ကိုနာရီ ၄၀ ကျော်ဖျော်ဖြေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သင့်ရဲ့ရေခဲသေတ္တာထဲမှာပြည့်နေပြီဆိုတာသေချာပါစေ။
လက်ဖြင့်ရေးဆွဲထားသောရှုခင်းကိုခံစားကြည့်ပါ။ သင်၏ပါတီ ၀ င်များလုံးဝပျက်စီးသွားလျှင်တောင်သင်ကြိုက်လိမ့်မည်။
သင်၏ရွေးချယ်မှုများ၊ စွမ်းရည်များနှင့်စွမ်းရည်များသည်သင်၏စစ်မြေပြင်၌သင်၏နည်းဗျူဟာများကိုဆုံးဖြတ်သည်။ ရန်လို? ခုခံကာကွယ်? နည်းဗျူဟာ? စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုချင်းစီတွင်သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။
သင်၏စွမ်းအား ၄၀ နှင့်စာလုံးပေါင်း ၉၀ ကျော်တို့၏အကူအညီဖြင့်သင်၏လမ်းပေါ်ရှိအရာအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်ဘက်နေရာတွင်ရှိနေပြီးဖျက်ဆီးခြင်းခံရနိုင်သည်။
သင်၏ Mac လိုအပ်ချက်များ -
Mac OS X 10.7 သို့မဟုတ်ထိုထက်နောက်မှ
MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini, iMac သို့မဟုတ် Mac Pro၊
သင့်ရဲ့ hard drive ပေါ်မှာ 20 GB အခမဲ့ဖြစ်သည်။
4 GB ကို RAM က။
updated: 13/02/2014 ။
ဗားရှင်း: 1.2 ။
ဘာသာစကားစပိန်၊ ဂျာမန်၊ ပြင်သစ်၊ အင်္ဂလိပ်၊ အီတလီ၊ ပိုလန်၊ ပေါ်တူဂီ၊ ရုရှား။
ဆော့ဖ်ဝဲရေး: Daedalic ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ပရိုဂရမ်များ » အားကစားပြိုင်ပွဲ » Blackguards သည် Mac App Store တွင်အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရောင်းချခဲ့သည်
Apple က OS X နှင့် iOS အတွက် iWork suite ကို update လုပ်သည်